रोचक प्रसङ्ग : Sajha Network - Nepal's No. 1 Online News Portal
नेपालले इतिहासमा पहिलो पटक सगरमाथाको को उचाई मापन गर्ने कार्य सगरमाथादेखि दक्षिणतिरका मध्यपहाडी तथा तराई क्षेत्रबाट शुरू भइरहेको छ । विश्वको सर्वोच्च शिखरको उचाइ मापन कार्यले अहिले निकै गति लिएको नापी विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्...
रक्सी पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भनिन्छ । तर यसका बाबजुत दुनियाँमा धेरै मानिसहरु मदिरापान गर्दछन् । रक्सीको मूल्य यो पिउने मानिसको हैसियतका आधारमा सस्तो देखि निकै महंगो पनि छ । यहाँ दुनियाँका केही...
एजेन्सी । के तपाइँले कहिल्यै भूत देख्नुभएको छ ? नदेखेपनि भूतका कुरा त प्रसस्तै सुन्नुभएको छ होला । तर सायद ज्यूँदो भुतका बारेमा चाहीँ सुन्नुभएको छैन होला । पश्चिम अफ्रिकाको एउटा सानो देश बेनिनमा ज्यूँदो...
ध्रुब क्षेत्री , दोहा कतार तलब आएको पहिलो शुक्रबार को बिहानी,करीब ७ बजे मोबाइल बज्यो । आँखा चिम्सो पार्दै हेरें- उनै को थ्यो । उनि’ अर्थात ‘फूलमाया’ । एउटा क्लिनिङ्ग कम्पनि मा काम गर्छिन उनि...
प्रेम सुनार, गुल्मी मंसिर २४। प्रेम र विवाहलाई उमेरले छेक्दैन, रोक्दैन भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरणका पात्र हुन घमिरका एक जना बृद्ध । घमिर गाविस वडा नम्वर ३ का पुर्णबहदुर मगरले ८८ वर्षको उमेरमा गरेको प्रेम...
सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ तर यो सत्यता हो । संसारमा नङको सुन्दरताका लागि महिलाहरुले लगाउने नङपालिस साढे दुइ करोड भन्दा बढि मूल्य पर्ने बनेका छन । दुनियाको सबैभन्दा महंगो नङपालिसको मूल्य साढे दुइ...
टर्कीमा ९ वर्षको उमेरका बालकको चमत्कार देखाए जो मानिसहरु चकित परे। जब ती बालक रिसाउँछन् उनको शरीर चुम्बक बन्दछ । आसपासका धातुका वस्तुहरु उनको शरीरमा टाँसिन थाल्दछन् । मेहमेत सुम्बल नामका यी बालकले आफ्नो...
प्रकृतिमा केही त्यस्ता रहस्यहरु लुकेका छन् जसको भेउ पाउन मानिसले अहिलेसम्म पनि सकेको छैन । भारतको झारखण्डस्थित बोकारो जिल्ला रहेको एउटा कुण्ड पनि यस्तै रहस्यले भरिएको छ । यो कुण्डमा ताली बजाउँदा पानी आफै निस्किन्छ...
विश्वमा सबैभन्दा बढि पानी पर्ने ठाउँ कुन हो ? लोकसेवा आयोगको तयारी गरी रहेकाहरुले यो प्रश्नको जवाफ फ्याट्टै भनि हाल्छन् । त्यो हो, भारतको माउसिनराम । कतिपयले भारतकै चेरापुन्जीलाई समेत सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने...
जब बाबुले नै बच्चालाई स्तनपान गराए
एजेन्सी । अमेरिकाका एक पिताले बच्चालाई स्तनपान गराएको भिडियो भाइरल बनेको छ । फ्लोरिडाका क्रिस एलिनले बच्चालाई दुध चुसाएको भिडियो भाइरल बनेको हो । उनी दिउसभर घरै बस्छन् । त्यसैले छोरीको स्याहार सुसार गर्ने जिम्मा...
१३ वर्षीय विद्यार्थीबाट २४ वर्षीया शिक्षिका गर्भवती
ओस्टिन: अमेरिकाको ह्यूस्टनमा शिक्षक-विद्यार्थीबीच भएको शारीरिक सम्बन्धको एउटा अनौठो घटना बाहिर आएको छ । यहाँकी एक शिक्षिकाको १३ वर्षीय किशोरसँग माया बस्यो । यतिमात्रै होइन दुबैले यौनसम्बन्ध राखेपछि शिक्षिका गर्भवती पनि भइन् । विद्यार्थीसँगको यौनसम्बन्धबाट...
दुई वर्षका बच्चाको ९ किलोको टाउको
बालकको तस्वीर देख्दै डरलाग्दो छ । २ वर्षको यो बच्चाको टाउँको यति ठूलो छ की टाउकोको आकार फुटबल जत्रै छ भने तौल चाहीँ सामान्य भन्दा तीन गुणा बढि छ । दक्षिणी बंगलादेशमा जन्मिएको इमोन नामको...
गुल्मीमा भेटिएको रातो पाण्डा होईन, निर विरालो हो
प्रेम सुनार, गुल्मी जेठ १३। हिजो विभिन्न सञ्चार माध्यममा गुल्मी अर्खलेको वनमा रातो पाण्डा नामक लोपन्मुख प्रजाति फेला पर्यो भन्ने समाचारप्रति जिल्ला वन कार्यालय गुल्मीको ध्यानकृष्ट भएको जनाईएको छ । उक्त समाचार आए लगत्तै जिल्ल वन...
पुरुषका लागि आयो पिसाब फेेर्ने कण्डम झोला
कतै हिँडेका बेला पिसाबले च्याप्याे तर पिसाब गर्ने ट्वाइलेट छैन । गाडी चलाइरहेका बेला जाममा फसियो तर पिसाबले निकै सतायो। घरमै भएका बेला पनि बारम्बार पिसाब लागिरहन्छ तर विभिन्न कारणले ट्वाइलेट सम्म जान सक्ने अवस्था...
जहाँ महिलाले भित्री वस्त्र लगाउन पाउदैनन्
यो दुनियामा यस्ता देशपनि छन् जहाँ महिलाले ब्रा तथा पेन्टी समेत लगाउन पाउँदैनन् भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रै पर्छ ।तर विश्वमा यस्ता देशको कमी छैन जहाँ अझैपनि महिलाहरु निकै तल्लो स्तरको जिवन बाँच्न बाध्य छन्...